1. Chii? Hazvina kumbofungidzirwa kuuya Kuuya kwenguva yakareba usati wapora Zvichida kusvika padanho rekusvotwa, kusvotwa, kutadza kuita chero chinhu. Vanhu vazhinji vanogona kunge vakasangana nedambudziko re hiccups. Izvo dzimwe nguva zvinouya panguva dzisingafanire kunge dzakaita Kuva mumusangano Kana kukurukura zviitiko zvakakosha Kana iri muchiitiko chekuti Kaiwa achazvarwa Kufunga nezvazvo, zvaishungurudza, zvichimbundira moyo wake nehasha. Asi usatya Nhasi tasvika pakuziva maitiro ekubvisa hiccups. Izvo isu takaungana kukuudza iwe kuti udzivise kusagadzikana Kana chiratidzo ichi chadzoka
2. Svika pakuziva izvo zvinokonzeresa hiccups usati waziva nzira yekubvisa yako hiccups. Panofanira kuva nechikonzero. Chero ani anoita izvo zvingangodaro anokwanisa kutarisira uye kudzivirira ichi chiratidzo chinogumbura? Hiccup inokonzereswa nemamiriro ekungoerekana abata mumhasuru yedhiramu iri pakati pechipfuva nedumbu. Nekuda kwechidimbu Kukonzera kukurumidza kufema Asi panguva imwecheteyo, mweya unouya unobatwa netambo dzenzwi idzo dzinovhara pakarepo. Kubva pakudzvanywa kwemasuru emarara Kukonzera kurira kwehikiki kunotitemesa musoro Zvinogona kuitika zvenguva pfupi uye zvobva zvanyangarika, kana mune zvimwe zviitiko zvinogara anopfuura maawa makumi mana nemakumi mana. Chibviro chinogona kunge chiri chekusvuta zvakanyanya. Kunwisa Idya chikafu nekukurumidza, usachitsenga zvakakwana kana kudya zvinonhuwira, flatulence. Inogona zvakare kukonzerwa nemhepo inoshungurudzika kana kamwe kamwe shanduko yetembiricha ichikonzera muviri kujairira nekukasira.
3. Nzira shanu dzekubvisa hiccups Uye haina kukanganisa muviri Kune chero munhu anokanganisa kazhinji Nhasi tinowana yakachengeteka uye yakapusa nzira. Zvinotonyanya kukosha, hazvikanganisa muviri kusiya mumwe nemumwe.
4. Tora sipo yemvura inotonhora kwazvo kana garle nemvura inotonhorera. Izvi zvinokutendera iwe kufema zvakanyanya nekumwa mukombe muhombe wemvura inotonhorera, uye mvura zvakare ichabatsira mhasuru dzinovharidzira kufema kwako kuvhurika uye kuzorora, asi zvishoma nezvishoma inwa uye bata mweya wako mushure mekunge wazorora. Kunonoka husiku kudzivisa kudzipwa.
5. Bata mweya wako kwenguva pfupi uchiverenga kusvika pagumi zvishoma. Izvi zvakafanana nenzira yekutanga. Mushure mekubata mweya wangu Tichakwanisa kufema zvakazara. Inogona kubatsira kubvisa zviratidzo zvehusiku husiku.
6. Idya zvakasviba, zvinotapira zvekudya secheka remoni kana chidimbu cheshuga Iyi ndiyo imwe nzira yekubatsira pfungwa dzako kuti dzirambe dzakamuka. Kubva pane kuravira kwechikafu Pasina kukonzera chero kukuvara
7. Koka shamwari kuti ikonzere kuvhunduka Kana zvinovhundutsa zvikaitika, muviri unofema nekukurumidza. Uye mhasuru inotambanuka kubva mukushamisika kunokurumidza
8. Kusveta kana kukonzera zviratidzo zvekuhotsira Izvi zvinotibvumidza kutora mweya wakadzika uye kuhotsira kunobatsira diaphragm uye mhasuru yemhepo kuti ishandiswe.
9. Kana nhanho dzataurwa pamusoro dzichiri kusarasika Uye kuenderera hiccups kweanopfuura maawa makumi mana nemasere, aifanirwa kuona chiremba kumushonga uye kurapwa kuti awane chikonzero Sezvandambotaura, chiratidzo chose chine mavambo acho. Uye kuva hiccup kwenguva refu, semuviri, kunotumira zviratidzo zvekuyambira kuti isu tive nechokwadi chekutarisa kuti tigare takachengeteka.